MB 2017 Janawari, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Fadlan maskaxda ku hay in dadka aan wali loogu yeerin inay rumaystaan ​​Masiixa indhahooda hortooda ku arkaan. Sababtoo ah dhicitaanka, waxay yihiin kuwo indhoole ah oo xagga ruuxa ah (2 Korintos 4,3: 4). Laakiin waqtiga saxda ah, Ruuxa Quduuska ahi wuxuu furaa indhahooda ruuxiga ah si ay wax u arkaan (Efesos 1,18). Aabayaasha Kaniisadda ayaa munaasabadan ugu yeeray mucjisooyinka iftiinka. Hadday taasi dhacday, waxaa suurta gal u noqotay dadku inay rumaystaan; rumayn karay wixii ay hada indhahooda ku arkeen.
In kasta oo dadka qaarkiis, in kasta oo ay indho indheeyaan, ay doorteen in aysan rumeysan, haddana waxaan aaminsanahay in badidoodu ugu dambeyntii si togan uga jawaabi doonaan baaqa Ilaah ee cad ee noloshooda. Waxaan Ilaahay ka baryayaa inay tan sameeyaan si dhakhso ah halkii ay markii dambe ka samaysan lahaayeen si ay u helaan khibrad nabadeed iyo farxad ay ku ogaadaan Ilaah oo ay dadka kale uga sheegaan Ilaahay waqtigan.
Waxaan aaminsanahay inaan aqoonsan nahay in kuwa aan rumaysadka lahayn fikradaha qaldan ee ku saabsan Ilaah. Fikradahan qaarkood ayaa ah natiijada tusaalooyinka xun ee Masiixiyiinta. Kuwo kale ayaa ka soo kacay fikrado aan caqli gal ahayn iyo kuwo la qiyaasi karo oo ku saabsan Ilaah oo sanado badan la maqlayey. Fikradahan qaldan ayaa sii xumaynaya indho la’aanta ruuxiga ah. Sideen uga falcelinaa gaalnimadooda? Nasiib darrose, Masiixiyiin badan ayaa ka falceliya dhismaha darbiyada ilaaliya ama xitaa diidmo adag. Marka ay saxaan derbiyadaas, waxay iska indhatirayaan xaqiiqada ah in kuwa aan rumaysadka lahayn ay Ilaah muhiim ugu yihiin rumaystayaasha. Waxay hilmaameen in Wiilka Ilaah uu u yimid dhulka uusan ahayn mu'miniinta oo keliya.
Markuu Ciise bilaabay wasaaraddiisa dhulka, ma jirin Masiixiyiin - dadka intiisa badan waxay ahaayeen kuwa aan rumeysneyn, xitaa Yuhuuddii waagaas. Laakiin nasiib wanaag, Ciise wuxuu saaxiib la yahay dembilayaasha - u dooda kuwa aan rumaysadka lahayn. Way u cadaatay in "caafimaadku uma baahna dhakhtar, laakiin bukaanka" (Matayos 9,12). Ciise wuxuu naftiisa u huray inuu baadho dambiilayaasha lumay si ay u aqbalaan isaga iyo badbaadada uu iyaga u soo bandhigo. Waqti aad u badan ayuu waqtigiisa la qaatay dadka loo arko kuwa kale inay yihiin kuwa aan istaahilin oo aan laga baqaynin. Sidaas darteed hoggaamiyaasha diinta ee Yuhuuddu waxay ku shaabadeeyeen Ciise inuu yahay "Wolverine iyo khamriga khamriga ah, oo saaxiib la ah cashuurqaadayaal iyo dembilayaal" (Luukos 7,34).
Injiilku wuxuu noo muujiyaa runta; Ciisena, oo ah Wiilka Ilaah, wuxuu noqday nin ina dhex jooga, wuuna dhintay wuuna koray; oo tan buu dadka oo dhan u sameeyey. Qorniinku wuxuu inoo sheegayaa in Ilaah jecel yahay "dunida". (Yooxanaa 3,16) Tani waxay keliya oo macnaheedu noqon kartaa in dadka intooda badani yihiin kuwa aan rumaysnayn. Ilaahay isku mid ah wuxuu noogu yeedhaa rumaystayaasha inaynu jeclaano dhammaan dadka sida Ciise oo kale. Si tan loo yeelo, waxaan u baahan nahay fahamka si aan ugu aragno Masiixa iyagoo aan weli rumeysan - sida kuwa isaga ah, kuwuu Ciise u dhintay oo u sara kacay. Nasiib darrose, way ku adag tahay Masiixiyiin badan. Sida muuqata waxaa jira Masiixiyiin ku filan oo doonaya inay xukumaan kuwa kale. Sikastaba, Wiilka Ilaah wuxuu ku dhawaaqay inuusan u imaan inuu xukumo dunida, laakiin inuu badbaadiyo (Yooxanaa 3,17). Nasiibdarro, Masiixiyiinta qaar ayaa aad u xiiseeya inay xukumaan kuwa aan rumaysadka lahayn in ay gebi ahaanba iska indho tiraan sida Ilaaha Aabbuhu u arko iyaga - oo ah carruurtiisa uu jecel yahay. Dadkan, wuxuu u diray wiilkiisii ​​inuu u dhinto iyaga, in kastoo ay iyagu ahaayeen ma garan karo (weli) aqoonsi ama jacayl. Waxaan u arki karnaa inay yihiin kuwa aan rumaysnayn, laakiin Ilaah wuxuu u arkaa inay yihiin rumaystayaasha mustaqbalka. Kahor Ruuxa Quduuska ahi wuxuu furayaa indhaha kuwa aan rumaysan, waxay ku xiran yihiin indho la’aanta rumaysad darrada - oo ku jahwareersan fikradaha fiqi ahaaneed ee ku saabsan aqoonsiga iyo jacaylka Eebbe. Shuruudahan ayay ku xidhan tahay inay tahay inaan jeclaano halkii aynaan ka fogaan ama diidin. Waa inaan tukanaa markii Ruuxa Quduuska ahi awooddooda siiyo, inay fahanto warka wanaagsan ee ku saabsan nimcada dib-u-heshiisiinta ee Eebbe oo ay runta ku aqbasho iimaan. Dadkani waxay geli karaan nolosha cusub iyagoo raacaya tilmaamaha iyo xukunka Eebbe, oo Ruuxa Quduuska ahi wuxuu awood u siinayaa inay ku helaan nabaddii la siiyay iyaga oo ah carruurtii Ilaah.
Markii aan ka fikirno kuwa aan rumaysadka lahayn, aynu xusuusno amarkii Ciise: “Midkiinba midka kale jeclaada,” wuxuu yidhi "Sidee baan kuu jeclahay" (Yooxanaa 15,12). Oo sidee buu Ciise inoo jecel yahay? Iyada oo noo oggolaatay in aan wadaagno noloshiisa iyo jacaylkiisa. Uma dhiso darbiyo inuu kala sooco rumaystayaasha iyo kuwa aan rumaysadka lahayn. Injiillada waxay inoo sheegeen in Ciise jeclaa oo aqbalay cashuurqaadayaasha, dhillayaasha, dadka haysta iyo kuwa baraska leh. Wuxuu kaloo jeclaaday dumarka sharaf xumo, askar ku jees jeesay oo garaacday iyo dambiilayaal iskutallaabo agtiisa ah. Markii Ciise iskutallaabta ku dhegay oo ka fikiray dadkaas oo dhan, wuxuu tukaday: «Aabbow, cafi; maxaa yeelay iyagu garan maayaan waxay samaynayaan! » (Luukos 23,34). Ciise wuu jecel yahay qof walbana wuu aqbalayaa si dhammaantood, iyagoo ah badbaadiyahooda iyo Sayidkooda, ay u helaan cafiska oo ay ugu noolaadaan Aabahood jannada ku jira Ruuxa Quduuska ah.
Ciise wuxuu ina siinayaa qayb ka mid ah jacaylkiisa kuwa aan rumaysadka lahayn. Marka aan sidaa yeelno, waxaan u aragnaa inay yihiin dad ay Ilaah iska leeyihiin, kuwuu isagu abuuray oo uu soo furan doono, in kasta oo aynan weli garanaynin cidda jecel iyaga. Haddii aan sii wadno aragtidaas, fikradaheenna iyo dhaqankeenna ku aaddan kuwa aan rumaysadka lahayn way is beddeli doonaan. Waxaan ku aqbali doonnaa gacmo furan iyadoo ah waalid agoon ah iyo xubno reero shisheeye ah oo aan weli aqoonin aabahood dhabta ah; sida kuwo walaalo ah oo walaalo ah oo aan ka warqabin inay iyagu xidhiidh la leeyihiin xagga Masiixa. Waxaan raadineynaa inaan la kulanno kuwa aan rumaysadka lahayn jacaylka Eebbe si ay iyaguna u soo dhoweeyaan nimcada Ilaah noloshooda.
Yaan kuwa aan rumeeysan wali dareemin jaceylka uu u qabo Ilaaha saddexanka ah.